Sawirro: Wasiirka Arrimaha Debadda Qadar oo booqday Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wafdi oo uu hogaamainayay wasiirka arimaha dibada dalka Qadar, Khaalid Bin Maxamed ayaa maanta booqasho waqti gaaban ku tegay caasimadda Soomaaliyae ee Muqdisho.
Wafdiga Qadar waxaa garoonka caalamiga Aadan Cabdule ku soo dhaweeyay wasiirka arimaha dibada ee xukuumada Soomaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, taliyaha ciidanka sirdoonka iyo nabad sugida qaranka Janaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur-yare, gudoomiyaha gobolka Banaadir, Xassan Maxamed Xuseen “Muungaab”, iyo mas’uuliyiin ka socotay safaarada dowlada Qadar ay kuu leedahay Soomaliya.
Wasaiirka arimaha dibada dalka Qadar iyo mas’uuliyiintii la socotay ayaa waxaa loo galbiyay aqalka madaxtooyada ee Villa Somalia, halkaasi uu kulan Kula qaatay Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isul wasaaraha xukuumada, Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmarke, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo sidii dowladda Qatar ay u dardargelin lahaayeen taageerada ay siiso Soomaaliya.
Markii shirku dhamaaday ayaa wasiirka arimaha dibada Qadar, Khaalid Bin Maxamed oo la hadlay Warfidiyeenka wuxuu sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay imaanshaha Soomaliya, isagoo tilmaamay inuu dalka ku arkay sbedel wanaagsan oo horumaro kala duwan isugu jira.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladiisu ay ka qeyb qaadan doonto dib u dhiska Soomaaliya wuxuuna xusay in ay gacan ka geysan doonto gurmadka loo fidinaayo qaxootiga ka soo cararaya dagaalada ka socda dalka Yeman ee soo gaaraya Soomaaliya.
Wasiirka arimaha dibada ee Xukuumada Soomaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay arrimaha ay ka hadleen wasiirka arimaha dibadda ee Qadar ay kamid tahay xoojinta Amniga Soomaaliya.
“Waxaan ka wada hadlaynay sidii aan isga wada kaashan laheyn xaga maniga, xaga caafimaadka iyo arrinta qaxootiga ka imaanaya Yemen, anaga iyo dowladda Qadar qadiyadda ka socota Yeman isku si’ ayaanu u aragnaa waxaan rabnaa dadka Yemanta ah in ay nabadgeliyo ku wada noolaadaan” ayuu yiri wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya.
Wasiirka arimaha dibadda Qatar ayaa sidoo kale waxaa uu kormeerey qeybo kamid ah magaalada Muqdisho ayagoona iska maanta dib ugu laabtay dalkooda.
Ciidanka Soomaaliya oo qura, ayaa suggaayay ammaanka wefdiga Wasiirka Arrimaha Dibadda Qadar.
Sawirro muujinaya guryo dadkii lahaa diideen in waddo la dulmariyo!